သံလို သွေးလို မာကြော ရဲရင့်ကြရလိမ့်မယ် (Tu Maung Nyo) – MoeMaKa Burmese News & Media
တူမောင်ညို။ သြဂုတ် ၈၊ ၂၀၁၂
ပြည်သူ့လွှတ်တော်က ကော့မှူးမြို့နယ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို “တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးနှင့်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ” အဖြစ် ခန့်အပ်လိုက်တာနဲ့ “၈၈ မျိုးဆက်များ”ထံ ဝန် ၂ ပါး က “ကျပ်ငွေ ၁၀ သိန်း” ပေးသွားတဲ့ ဖြစ်ရပ်ဟာ သဘောရိုးမဟုတ်ပါ။ သာမန်တိုက်ဆိုင်မှုမဟုတ်ပါ။
၁၉၈၈ခုနှစ်၊ ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံကြီး (ရှစ်လေးလုံးလှုပ်ရှားမှုကြီး)နဲ့ ရှစ်လေးလုံး ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံက တညီတညွတ်တည်းရွေးချယ်ပေးလိုက်တဲ့ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ကို အသရေဖျက်လိုက်တာပါ။ နတ်သုဒ္ဓါထဲ မစင်တစ်ပဲ ရောထည့်လိုက်တာပါ။
“တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးနှင့်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကော်မတီ နဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ”
“ သက်ဆိုင်ရာဌာနအဖွဲ့အစည်းများမှ အခါအားလျော်စွာ ထုတ်ပြန်သည့်နည်းဥပဒေ ၊ စည်းမျဉ်း၊ စည်း ကမ်း၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်ညွန်ကြားချက်များနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသည် တည်ဆဲဥပဒေများနှင့် လည်းကောင်း၊ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်မှ ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည့်ဥပဒေများနှင့် လည်းကောင်း ညီညွတ်ဆီလျော်အောင် ဆောင်ရွက်စေပြီး၊ ညီညွတ်ဆီလျော်မှုရှိပါက လိုက်နာဆောင်ရွက်မှုကို စောင့်ကြည့် ထိန်းညှိကူညီရမည်” တဲ့။
အင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီအစိုးရက သူတို့ စိုးမိုးမှုကို တွန်းလှန်သူတွေကို နှိမ်နင်းရာမှာ ပြတ်သားတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ နောက်လိုက် ငယ်သားတွေကို တိုက်ပွဲတွင်းမှာဆို အသေပစ်သတ်ပြီး၊ အားမတန်လို့ အဖမ်းခံကြရသူတွေဆိုရင် သေဒဏ်ပေးခဲ့ကြတယ်။ ဥပမာ တောင်သူလယ်သမားခေါင်းဆောင်ဆရာစံ။
လက်နက်ချ၊ အညံ့ခံဒူးထောက်သူများကိုတော့ တွန်းလှန်မှုတွေနှိမ်နင်းရာမှာ လမ်းပြအဖြစ်အသုံးချတယ်။ ဓါးပြလူဆိုး သူခိုးတွေကိုလည်း ဓါးပြသူခိုး ဖမ်းဆီးရေးမှာ ပုလိပ်သတင်းပေးအဖြစ် ပြန်အသုံးချလေ့ရှိတယ်။ အဲဒီလိုနည်းလမ်းတွေကို ဒီကနေ့ ဦးသိန်းစိန်ကြံ့ဖွံ့အစိုးရအထိ အဆက်ဆက်သော အုပ်စိုးသူများကလည်း ကျင့်သုံးခဲ့ကြတယ်။
ဖက်ဆစ်ဂျပန်တော်လှန်ရေးပြီးနောက် ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာတဲ့ အင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီအစိုးရကလည်း (ဖဆပလ) နဲ့ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းကို ပြည်သူလူထုနဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့ပေးခဲ့ဖူးတယ်။ ကိုယ့်တပ်ကိုယ် ပြန်နင်းရတဲ့ကိန်းဆိုက်ခဲ့ရတယ်။ “စက်တင်ဘာအုံကြွမှု” ကို နှိမ်နင်းခဲ့ရတယ်။
“တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး” လို့ဆိုရာမှာ ဘယ်လိုအမျိုးအစားတရားဥပဒေကို စိုးမိုးစေမှာလဲ ဆိုတာက အခရာကျပါတယ်။ ပြည်သူ တွေကို မတရားသဖြင့်ဖိနှိပ်ထားတဲ့ ဥပဒေတွေ စိုးမိုးရေးတော့လုပ်ဖို့မသင့်ပါဘူး။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုတာ ဥပဒေအားလုံးရဲ့ ပင်မ အခြေခံဥပဒေဖြစ်ပါတယ်။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ (၂၀၀၈) ဟာ အတင်းအဓမ္မအတည်ပြုခဲ့တဲ့ဥပဒေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အခြားသော ဖိနှိပ်ရေးဥပဒေများကလည်း (မပယ်ဖျက်သမျှ/လက်ရှိအခြေခံဥပဒေနှင့်မဆန့်ကျင်သမျှ) တည်ဆဲဥပဒေများ အဖြစ်တည်ရှိနေပါတယ်။
(NLD)နဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ(၂၀၀၈) ပြင်ဆင်ရေးကို မဆောင်ရွက်နိုင်ခင်မှာ အခြေခံဥပဒေနဲ့ အခြားတည်ဆဲဥပဒေများ “စိုးမိုးရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေး” လုပ်ရတော့မယ့် ကိန်းဆိုက်သွားပါပြီ။
ဒါ့အပြင် ဆက်တိုက်ဆိုသလို ပေါ်ပေါက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ လယ်ယာမြေ မတရားအသိမ်းခံနေရတဲ့ လယ်သမားတွေ၊ အလုပ်ခွင်နဲ့ လုပ်ခ၊လစာအခွင့်အရေးဆိုးရွားနိမ့်ကျနေရတဲ့ အလုပ်သမားတွေ၊ လွတ်လပ်စွာရေးသားဖေါ်ပြခွင့်ပိတ်ပင်ကန့်သတ်ခံရတဲ့ မီဒီယာသမား တွေ၊ လျှပ်စစ်မီးနဲ့ ကုန်ဈေးနှုန်းကြီးမြင့် မှုဒဏ်ကိုလက်တွေ့ ခံစားနေရတဲ့ မြို့နေဝန်ထမ်းနဲ့ဆင်းရဲသားတွေ၊ ကျောင်းသားသမဂ္ဂဖွဲ့ စည်းရေးအတွက်လှုပ်ရှားနေကြတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေ စတဲ့ လူတန်းစားလူ့အလွှာအသီးသီးရဲ့ တောင်းဆိုဆန္ဒပြမှုတွေနဲ့ “တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးနှင့်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ”ကို ထိပ်တိုက် တွေ့ပေးလိုက်တာပဲမဟုတ်လား။
ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုရေးက ပထမသင်ခန်းစာဖြစ်ပြီး၊ ကွန်ဟိန်းမဲဆန္ဒနယ်မှ ဒေါ်နန်းဝါနုနဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း တို့ပေးတာက ဒုတိယသင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ်။ “တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးနှင့်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ” လို့ ခန့်အပ်လိုက် တာကတော့ တတိယမြောက်သင်ခန်းစာ လို့ပြောရမှာပါ။ တာဝန်ပေးအပ်လိုက်ပြီဆိုတော့ တာဝန်ခံမှုနဲ့တာဝန်ယူမှုရှိရပါတော့မယ်။
အရင်က “မတရားအမိန့်အာဏာဟူသမျှ တာဝန်အရ ဖီဆန်ကြ” ဆိုပြီးလှုပ်ရှားခဲ့ကြရတာပါ။
အခုတော့အရင်နဲ့မတူ “တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေး တာဝန်အရ” ဆောင်ရွက်ရပါတော့မယ်။
လူထုခေါင်းဆောင်ကို လူထုဆန္ဒပြမှု၊ လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ ခေါင်းချင်းဆိုင်ပေးလိုက်ပါပြီ။
ဓါးပြတိုက်၊ လူသတ်၊ မုဒိန်းကျင့်၊ ရွာမီးရှို့ စတဲ့ ရက်စက်ယုတ်မာမှုမျိုးစုံကို ကမ်းကုန်အောင်လုပ်ခဲ့သူက တစ်နေ့တစ်မနက်မှာ ခေါင်းတုံးရိတ်၊ သင်္ကန်းဝတ်ပြီး ရွာထဲဆွမ်းခံလာတဲ့ အချိုးမျိုးပါပဲ။ (ရွာသားတွေ စိတ်ထဲမှာတော့ ခေါင်းရိုက်ခွဲပစ်ချင်စိတ်တွေက တားမရ ဆီးမရပါပဲ )
၁၉၈၈ခုနှစ်၊ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံကြီး(ရှစ်လေးလုံးလှုပ်ရှားမှုကြီး) ကို (နဝတ-နအဖ) စစ်အစိုးရက အသိအမှတ်မပြုခဲ့သလို၊ ဦးသိန်းစိန်ကြံ့ဖွံ့အစိုးရကလည်း အသိအမှတ်မပြုပါဘူး။ “တိုင်းဆူပြည်ဖျက်၊ မင်းမဲ့စရိုက်ဆူပူသောင်းကျန်းမှု”လို့သာ တစ်သမတ်တည်း သရုပ်ဖျက် ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲခဲ့ပါတယ်။ ဒီလှုပ်ရှားမှုကြီးမှာပါဝင်ခဲ့ကြသူများကို နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်များချမှတ်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား အဖြစ် အသိအမှတ်မပြုခဲ့ပါဘူး။
မကြာသေးခင်ကပဲ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ထဲမှာ ၁၉၈၈ခုနှစ်၊ ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံကြီး (ရှစ်လေးလုံးလှုပ်ရှားမှုကြီး) ကိုရည်ညွန်း သုံးစွဲ ခဲ့တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းက တားမြစ်ခဲ့သေးတယ်မဟုတ်ပါလား။
သူတို့ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ “၇ ရက်ဇူလိုင်” နှစ် ၅၀ ပြည့် အခမ်းအနားလှုပ်ရှားမှုကို သင်ခန်းစာယူခဲ့ပုံ ပေါ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဝန် ၂ ပါး ငွေ ၁၀ သိန်း နဲ့ ကြိုတင်အချိုသပ်တာပါ။ ကြိုတင်ထိန်းချုပ်တဲ့သဘော ဖြစ်ပါတယ်။
မတရားတဲ့အမိန့်ဥပဒေတွေ စိုးမိုးနေသမျှတော့ ခေါင်းတုံးရိတ်၊ သင်္ကန်းဝတ်လာတဲ့ လူဆိုးလူမိုက်ကို (စိတ်ထဲကမပါတောင်) မတ်တပ်ရပ်ပြီးလက်အုပ်ချီနေကြရပါလိမ့်ဦးမယ်။
– မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာ (၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၈ ရက်)
← Kamar Pale – 8888
တခါက အမေတို့ ရွာမှာ …. (Kama Pale) →
တူမောင်ညို – သတင်းစာထဲက ငရဲခွေးကြီးတွေနဲ့ အမတ်မင်းများ၏ စိန်ခေါ်ပွဲ
7 thoughts on “သံလို သွေးလို မာကြော ရဲရင့်ကြရလိမ့်မယ် (Tu Maung Nyo)”
Myint Zu says:
လူဆိုတာ မစားရအမဲသဲနှင့်ပစ်ဆိုစကားရှိတော့ လူတိုင်း ဒီလိုအားလုံးမြင်ရင်တော့ တိုင်းပြည် ဘယ်တော့မှ မတိုးတက် နိုင်တော့ဘူး သူခိုးကလည်း တသက်လုံး သူခိုးလုပ်စား ရတော့မလား။ လူမိုက်လည်း တသက်လုံး လူမိုက်ဘ၀နှင့်နေ၇တော့မလား ပြောင်းလဲခြင်တယ် ဘ၀ အသစ်တဖန် ပြုပြင်လိုခြင်တယ် ဆိုရင်တော့ လူ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းကလက်ခံဖို့ ဝန်မလေးကြဘူး ခုနလို အမေစု က “တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် တည်ငြိမ်ရေး “တာဝန်ကို ယူလိုက်ရလို့ အမေစု မျက်ကန်းတောတိုး လုပ်မလား လူထုက လည်းပဲ မျက်ကန်းတောတိုး လုပ်မလားဆို တာစောင့်ကြည့်ဖို့လိုသေးကြောင်း စာရေးသူထံ အသိပေးဝေဖန် လိုက်ပါတယ်။
You always see things from dark side………
အတိုက်အခံမလုပ်ရရင် စားမ၀င်အိပ်မပျော်တဲ့ သူတွေကလည်းရှိသေးတာပဲနော်။
ကြိုက်၏။ လိုတိုရှင်း ဖြစ်၏။ ကောင်း၏။
Dear Tu Maung Nyo,
Nothing is permanent in this world. Only the change is permanent. Likewise, political changes from U Thein Sein goverment have to be welcomed. 1988 is 24 years ago and we have just started the change. We all should have optimism for this co-operation. So many lives have been sacrificed to have this change. We should not move backward. Even U Thein Sein might not start the change, what can you do? You cannot do anything, right? Only the people have to suffer and the minority shall not worry for their daily living. Do have the optimism! I remember what Daw Aung San Su Kyi said, “If they want to use me for the sake of country, they can make use of me”. This is the great. Consider deeply.
Mg Myanmar says:
I believe this newly founded committee is kind of Ombudsman office which handles complaints, conducts investigations, performs audits and inspections and encourages good administration. It does not seem to be the way what Tu Maung Nyo think.
Sometime, wait and see is best way… you should not jump to the conclusion. Not just yest.
p soe ပြောတဲ့အထဲမှာဦးသိန်းစိန်အစိုးရမပြောင်းရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဆိုတာကြီးတော့သဘောမတွေ့ဘူး။ သူတို့